सरोज खनाल नेपाली चलचित्रका अग्रज नायक हुन् । आफ्नो समयमा चलचित्र उद्योगमा एकछत्र राज गरेका उनी केही समय अमेरिका बसेर फर्किए । अमेरिकाबाट फर्किएपछि पनि उनी अहिले चलचित्र उद्योगमै सक्रिय छन् । भलै रोल फेरिएको छ । पहिला नायक थिए, अहिले चरित्र अभिनेतामा परिणत भएका छन् । तिनै सरोज अहिले एक्टिङ स्कुल खोल्ने अन्तिम तयारीमा छन् । चन्द्रमाला शर्मा र सरोज मिलेर काठमाडौंमा माला आर्टस् एकेडेमी खोल्दैछन् । उक्त एकेडेमीले वर्षमा तीनवटा ब्याच चलाउने छ । प्रत्येक ब्याचमा १५–१५ जना विद्यार्थी रहनेछन् । एउटा ब्याचलाई एकेडेमीले तीन महिना पढाउने छ । एक्टिङ स्कुलको भीडमा अर्को स्कुलको आवश्यकता किन ? अरुभन्दा फरक के ? लगायत चलचित्र क्षेत्रका अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर नायक सरोज खनालसँग बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानीः
अहिले पूर्ण समय माला आर्ट एकेडेमीलाई दिइरहेको छु । यसको भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । यसमै व्यस्त छु भन्नुपर्छ ।
अभिनय सिकाउने धेरै एकेडेमीहरु छन्, त्यही भीडमा तपाईंहरु आउँदै हुनुहुन्छ । माला आर्ट एकेडेमीमा फरक के छ अरुभन्दा ?
हामी कान्छो हौं अहिलेसम्मका लागि । धेरै एकेडेमी हुँदाहुँदै हामी आएका छौं, त्यसैले चुनौती पक्कै पछि छ, तर अरुभन्दा फरक छौं भनेर हामीले देखाउन खोजिरहेका छौं ।
के अर्थमा फरक ?
जुन हिसाबले क्लासरुम सेटअप गरेका छौं, जुन सेलेबस तयार पारेका छौं, त्यसले फरक देखाउँछ । अडियो भिजुअल दुवै माध्यममा पढाउँछौं । डिटेलमा पढ्ने हो भने तीन वर्षको कोर्ष हो । तर हामी तीन महिनामा पढाउँछौं । अभिनेत्री तथा अभिनेता बन्नका लागि आवश्यक सबै पक्षमा पूर्ण बनाएर विद्यार्थीलाई छोड्छौं ।
अर्को मुख्य कुरा हामी स्कुलमात्रै नभएर प्रोडक्सन हाउस पनि हौं । अरु एकेडेमीले विद्यार्थीलाई पढाउँछन् र आफ्नो बाटो आफै खोज भनेर पठाइदिनु हुन्छ तर हामी त्यसो गर्दैनौं । हामी हाम्रो विद्यार्थीलाई आफैंसँग काम पनि गराउँछौं र बाहिर जाँदा पनि काम गर्ने वातावरण बनाउँछौं । बाहिर काम गर्न जाँदा हामी यो कुरा मलाई थाहा थिएन र जानेको छैन भन्ने अवस्था सिर्जना हुन दिँदैनौं ।
थुप्रै एकेडेमी छन्, जसलाई रनिङ हुन पनि गाह्रो भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा माला आर्टस् एकेडेमीलाई पनि त चुनौती त अवश्य होला नि !
तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता छ । तर हामीले तीन महिनाको कोर्षका लागि ६० हजार लिने छौं । अरु एकेडेमीको तुलनामा यो निकै कम हो । हामीले दिने सेवा, सुविधा र कोर्षका हिसाबले यो निकै न्यून रकम हो । यो सुनेर विद्यार्थीहरु निकै उत्साही भएको देखेर हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।
माला आर्टस्मा आएका विद्यार्थीले यहाँ पढेकै कारण पाउने फाइदा के हो ?
प्रत्येक तीन–तीन महिनामा हाम्रो विद्यार्थीले नाटक गर्छन् भनेर हमीले राष्ट्रिय नाच घरसँग सम्झौता गरिसकेका छौं । तीन–चार वटा टेलिभिजनसँग हामीले टेलिफिल्म निर्माणका लागि यो हप्तामै सम्झौता गर्दैछौं । फिचर फिल्म निर्माणमा जाने पनि हाम्रो योजना छ । सानो–सानो कामबाट पोख्त बनाएर फिचर फिल्ममा लैजाने हाम्रो सोच हो । प्रोडुसर पनि हाम्रो गु्रपमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि हामी आफ्नो प्रोडक्ट देखाउँछौं र लिनका लागि आग्रह गर्छौैं । तर हामी विद्यार्थीलाई शुरुमा ठूला ठूला सपना बाँड्दैनौं । सर्ट फिल्म बनाएर त्यसमा अवसर दिन्छौं ।
म यहाँको टिचर होइन । म यहाँको विद्यार्थीसँग रिहर्सलमा एक्टिङ गर्छु । ताकी उहाँहरुलाई आफूभन्दा सिनियर कलाकारसँग काम गर्दा गाह्रो नहोस् । म आफैले भोगेको कुरा हो यो । तुलसी घिमिरे, भुवन केसी, गौरी मल्ल, नीर शाह जस्ता सिनियर कलाकारसँग एकैपटक काम गर्दा कतै मेरो कारणले उहाँहरुको काम बिग्रिने त होइन भन्ने डर हुन्थ्यो । माला आर्टस् एकेडेमीका विद्यार्थीमा यो डर नहोस् भनेर गेष्ट टिचरलाई पनि विद्यार्थीसँग असिनय गराउने हाम्रो तयारी छ । जसका कारण भोली उनीहरु बजारका स्थापित कलाकारसँग काम गर्न नडराउन् ।
चलचित्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रमै लगानी गर्नुको खास केही कारण छ ?
मैले लामो समय यही क्षेत्रमा काम गरेँ । मैले केही कुरा सिकेँ । मैले जानेको कुरा आउँदो पुस्तालाई सेयर गरेँ भने सरोज खनालले खोलिदिएको स्कुलबाट मैले सिकेर आज यो ठाउँमा छु भनेर भोलिको पुस्ताले भन्यो भने म जीवन्त रहने छु भनेर पनि हो । अर्को कुरा अरु स्कुल जसरी चलिरहेका छन् त्यसप्रति म आफैँ सन्तुष्ट नभएर पनि म यता केन्द्रित भएको हुँ ।
अब तपाईंको चलचित्र यात्रामा कुरा गरौं । अपकमिङ मुभी कुन हो ?
‘क्याप्टेन’, ‘ब्रेकअप’, ‘घनचक्कर’ लगायतका चलचित्र छन् । आजै पनि सुदर्शनजीको चलचित्रमा सम्झौता गर्दैछु ।
अमेरिकाबाट फर्किएपछि वर्षमा बढीमा दुई वटा चलचित्रमा अभिनय गर्छु । मेरो प्राथमिकता पोल्ट्री फार्म खोल्नु र सञ्चालन गर्नु हुनेछ भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले त चलचित्रमै व्यस्त हुनुभयो नि !
मेरो दैनिकी बिहान ५ बजेबाट शुरु हुन्छ । आधा घण्टा एक्सरसाइज गरेर ६ बजे पोेल्ट्री फार्मको शोरुम एकान्तकुना पुगिसक्छु । चितवनबाट ५ बजे ट्रकमा अण्डा आइसक्छ । त्यहाँ पुगेर म अण्डा डिष्ट्रिब्युसन गर्छु । होलसेल भएकाले रिटेलर आएर लैजानुहुन्छ । प्रोल्ट्री फार्मको शोरुमबाट ११ बजे बल्ल घर आइपुग्छु ।
फिल्मको संख्या बढेको बढ्यै छ, स्क्रिप्ट छोड्न नसकेर हो ?
स्क्रिप्ट राम्रो भएर होइन, सम्बन्धले पनि काम गर्यो । दुई–चारवटा खेल्नै नहुने चलचित्रमा पनि मैले काम गरेको छु । साथीहरुले आग्रह गरेपछि नकार्न नसकेर मन नपरेका कथामा पनि अभिनय गर्न बाध्य भएको छु । सँगै स्ट्रगल गर्दा, सँगै काम गरेका साथीहरु अहिले कोही प्रोडुसर भए, कोही निर्देशक भए । उहाँहरुले दाइ मेरो चलचित्रमा काम गरिदिनुपर्यो भनेपछि मैले उहाँहरुको बचन काट्न नसकेर खेलेको छु ।
अमेरिकाबाट फर्किएपछिको नेपाली चलचित्र उद्योगमा के फरक पाउनुभयो छोडेर जानु अघिकोभन्दा ?
व्यक्तिगत रुपमा भन्नुहुन्छ भने मेरो क्यारेक्टर नै फरक भइसकेको छ । त्यो समय म लिड रोलको नायकमा रुपमा चलचित्रमा हुन्थेँ भने अहिले त्यो अवस्था छैन । म त्यो रोलमा अहिले काम गर्न सक्तिन भनेको होइन । विदेशमा हो भने बल्ल नायक हुने उमेर हुँदैछ । तर, यहाँ जुँगा र कपाल फुलेपछि क्यारेक्टर रोलमा गएहुन्छ भन्ने सोचाइ छ । तर, म सन्तुष्ट नै छु । समयसँगै म पनि परिवर्तनशील हुनुपर्छ । समयसँगै आफूलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने आफैं दुःखी भइन्छ । कति साथीहरु यही कारण चलचित्र क्षेत्रबाट हराउँदै गइरहनु भएको छ । मलाई अफर गर्दा छि ! भन्ने खालको रोल अफर गरिदिनु भएको छैन ।
अर्को कुरा प्रविधिका हिसाबले नेपाली चलचित्र निकै अगाडि बढिसकेको छ । तर विकास सँगसँगै विनास पनि आउँछ भनिन्छ । त्यो पनि देखिरहेको छु मैले ।
कस्तो विनास भन्न खोज्नुभएको ?
सिनेमा बनाउन यस्तो क्राउड आयो, जसलाई सिनेमाको ‘स’ पनि थाहा छैन । पहिला रिलमा खिच्नु पथ्र्यो । जति धेरै टेक लियो त्यति धेरै खर्च हुनथ्यो । अहिले डिजिटलमा गएपछि त्यो खर्च जोखिएको छ । त्यसैले पनि चलचित्रमा लगानी गर्नेको संख्या बढेको छ । चलचित्र निर्माणलाई सजिलो माध्यमका रुपमा हेरिदिनुभयो । यो नै नेपाली सिनेमाको विनास हो । नेपाली चलचित्र बजारले वार्षिक सयवटा चलचित्र थेग्न सक्तैन । ५० वटासम्म बने भने ठिकै मान्न सकिन्छ । विदेशी मार्केट छैन नेपाली चलचित्रको । पहिला–पहिला चलचित्र निर्माण गर्ने निर्माता घाटामा जानु पर्दैनथ्यो । तर, अहिले ९८ प्रतिशत चलचित्र घाटामा छन् । वार्षिक अर्बभन्दा धेरै रकम खेर गइरहेको छ । चलचित्र बुझेर मात्रै लगानी गरेको खण्डमा पैसा पनि डुब्दैन र नाम, दाम पनि कमाइन्छ ।
कथा र अभिनयमा केही परिवर्तन आयो कि आएन ?
परिवर्तन पक्कै पनि भएको छ । हामीले त्यो बेला बनाउने चलचित्र र निर्देशक भारतबाट सिकेर आउनुहुनथ्यो । जस्तै– प्रकाश थापा, तुलसी घिमिरे । त्यही भएर भारतीय फर्म्याटमै चलचित्र बन्थे । कति निर्देशकले त मलाई किन चाहियो स्क्रिप्ट ? फलानो हिन्दी चलचित्र जस्तै बनाउने हो, त्यही चलचित्र हिरोको जस्तै रोल हो तपाईंको, त्यही चलचित्र हेरे भइगयो नि भन्नुहुन्थ्यो ।
अहिले थिएटरबाट आउने साथीहरुको बाहुल्य छ । उहाँहरुले मौलिक चलचित्रमा अभिनय गरिरहनु भएको छ । योचाहिँ नेपाली चलचित्र हो भनेर गौरव गर्ने खालका चलचित्र पनि बन्न थालेका छन् । रामबाबु गुरुङ, दीपेन्द्र के खनालले मौलिक कथामा चलचित्र बनाइरहनु भएको छ ।
पहिलाको अभिनयमा नाटक गर्नुपथ्र्यो, अहिले रियालिष्टक अभिनय हुन्छ भनिन्छ, हो ?
अभिनय गर्न अहिले धेरै सजिलो छ । पहिला रि–टेक माग्नलाई डाइरेक्टरसँग अनुनय–विनय गर्नुपथ्र्यो । तर, भइगयो नि चल्छ यत्तिकोले भन्थे । जति रिल खर्च भयो, चलचित्रको लगानी त्यति नै बढ्थ्यो तर अहिले डिजिटलमा आएपछि जति टेक लिए पनि केही फरक पर्दैन ।
पहिला थिएटरमा दर्शक र कलाकारबीचको दूरी टाढा हुन्थ्यो । पिन माइक्रोफोन थिएन । दर्शक पछाडिबाट सुनिएन भनेर कराउँथे । कथा र परिवेश एकातिर हुन्थ्यो, माइक्रोफोन कहाँ झुण्डाएको छ भनेर कराउँदै हिँड्नुपथ्यो । अहिले नयाँ–नयाँ थिएटर बने, क्लोज थिएटर बने, जहाँ दर्शक र कलाकारबीचको दूरी नजिकै हुन्छ । लाउड एक्टिङ गर्नै पदैन । आरोहणबाट हामीले नै यो शुरु गरेका हौं । क्लोज थिएटरबाट निस्किएका कलाकारकै चलचित्रमा अहिले बाहुल्य छ ।
९८ प्रतिशत चलचित्रको लगानी डुबिरहेका बेला राम्रा चलचित्र बनाउने केही उपाय छ ?
यसमा हामी मेकरहरु नै अलि गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी देख्छु । चलचित्र विकास बोर्डको पनि केही हात छ तर म सरकारको मुख ताकेर मात्रै हुँदैन भन्छु । सरकारले चलचित्रको प्रबद्र्धनमा केही भूमिका खेलिदिए मात्रै पुग्छ । राम्रो चलचित्र बनाउने त हामी आफैँले हो ।
यस्तो खालको चलचित्र बनाउने भनेर स्क्रिप्टदेखि नै सेन्सर गरिदिनुपर्छ । यहाँ स्क्रिप्ट कसैले पढ्दैन । दर्ता गर्ने काममात्रै हुन्छ । स्क्रिप्ट हेरेर सेन्सर गरिदिए मात्रै पनि चलचित्र निर्माणमा आएको बाढी नियन्त्रण हुने थियो ।
आजकाल कलाकारले चलचित्र निर्माण र निर्देशन गर्ने ह्विम नै छ । तपाईं निर्देशनमा आउने कहिले हो ?
म तत्काल निर्देशनमा आउँदिन । निर्देशन निकै गाह्रो काम हो । मैले निकै पहिला एउटा भिडियो फिल्म निर्देशन गरेको थिएँ । त्यो बेला म कलाकारलाई यसरी एक्टिङ गर भनेर सिकाउन थालेँ, वास्तवमा सेटमा एक्टिङ सिकाउँदै हिँड्ने काम निर्देशकको होइन । मैले सिकाएको हुँदा हरेक कलाकारको एक्टिङ सरोज खनालको जस्तो देखियो पर्दामा ।